Baiboly Irlandey Nadikan’i William Bedell
Ny Tilikambo Fiambenana | Septambra 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
NANDEHA tany Irlandy ny pasitera anglisy atao hoe William Bedell, tamin’ny 1627, ka gaga rehefa nahita ny zava-nisy tany. Katolika mantsy ny ankamaroan’ny olona nefa Protestanta anglisy no nitondra. Efa nadikan’ny mpitondra fanavaozana tamin’ny fiteny samihafa nampiasaina eran’i Eoropa ny Baiboly. Tsy nisy nieritreritra ny handika azy io tamin’ny teny irlandey anefa.
Hitan’i Bedell hoe tsy rariny raha avela fotsiny amin’izao ny Irlandey, satria tsy mahay teny anglisy. Te hamoaka Baiboly amin’ny teny irlandey àry izy. Nisy nanohitra mafy anefa izy, ary ny Protestanta no tena nanao an’izany. Fa nahoana?
TSY NAVELA HAMPIASAINA NY TENY IRLANDEY
Niezaka nianatra teny irlandey i Bedell. Lasa talen’ny Oniversiten’i Trinity tany Dublin izy, ary avy eo lasa evekan’i Kilmore. Nampirisihany hampiasa teny irlandey ny mpianatra. I Élisabeth I, mpanjakavavin’i Angletera, no nanorina an’io oniversite io. Ny tanjony dia hoe hanofana pasitera mba hampianatra Baiboly ny vahoakany amin’ny fitenin-drazan’izy ireo tsirairay avy. Niezaka nanao an’izany àry i Bedell.
Niteny irlandey ny ankamaroan’ny olona tao amin’ny diosezin’i Kilmore. Nangataka pasitera nahay niteny irlandey àry i Bedell. Nitovy hevitra tamin’ny apostoly Paoly izy. Hoy mantsy i Paoly ao amin’ny 1 Korintianina 14:19: “Aleoko milaza teny dimy azon’ny saiko mba hampianarako ny hafa koa, toy izay hilaza teny iray alina amin’ny fiteny samihafa.” Nihevitra i Bedell hoe aleo fiteny azon’ny olona ihany no ampianarana azy ireo.
Nosakantsakanan’ny manam-pahefana anefa ny ezaka rehetra nataony. Nilaza ny mpahay tantara fa nisy nihevitra hoe “mampidi-doza ny Firenena” ny fampiasana teny irlandey, ary ny hafa indray niteny hoe “manelingelina ny tombontsoan’ny Fanjakana” izany. Nisy kosa nieritreritra hoe tsara kokoa raha tsy ampianarina ny Irlandey, mba ho tombontsoan’i Angletera. Nisy lalàna navoaka mihitsy aza hoe tokony hiala amin’ny fomban-drazany ny Irlandey ary tsy hampiasa ny fiteniny intsony, fa hianatra teny anglisy ary hanaraka ny fomba amam-panao anglisy.
NY EZAKA NATAON’I BEDELL
Tsy nahakivy an’i Bedell anefa izany. Tamin’ny 1632 tany ho any, dia nadikany tamin’ny teny irlandey ilay Baiboly anglisy nivoaka farany tamin’izany (ny Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques, tamin’ny 1611). Te hamoaka Baiboly mazava tsara amin’ny olona be dia be izy. Resy lahatra izy fa tsy ho fantatry ny olona mahantra mihitsy hoe ahoana no hahazoana fiainana mandrakizay, raha tsy adika amin’ny fitenin’izy ireo ny Baiboly.—Jaona 17:3.
Efa nisy nitovy hevitra tamin’i Bedell, 30 taona teo ho eo talohan’izay. Tsy iza izany fa ny eveka William Daniel. Hitany hoe sarotra be tamin’ny olona ny nianatra Baiboly, satria tsy hainy akory ilay fiteny nanoratana an’ilay izy. Nadikan’i Daniel tamin’ny teny irlandey àry ny Soratra Grika Kristianina. I Bedell indray izao no handika ny Soratra Hebreo. Natambatra ny fandikan-tenin’izy roa lahy, ka nantsoina hoe Baibolin’i Bedell. Io no Baiboly voalohany voadika tamin’ny teny irlandey, ary tsy nisy afa-tsy io nandritra ny 300 taona nanaraka.
Nanam-pahaizana momba ny teny hebreo i Bedell. Niantso Irlandey anankiroa izy hanampy azy handika an’ilay Baiboly. Rehefa voadika ilay izy, dia nisy namany natokisany iray na roa nasainy nanampy azy hanamarina ny andinin-teny tsirairay sy hanatsara an’ilay izy. Ireto avy ny loharanon-kevitra nojeren’izy ireo: Baiboly italianina nadikan’i Giovanni Diodati avy any Soisa, ny Fandikan-teny Grikan’ny Fitopolo, ary sora-tanana amin’ny Baiboly Hebreo.
Nanaraka ny fomba fiasan’ireo nandika ny Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques izy ireo, ka nampidiriny tao ny anaran’Andriamanitra. Nataon’izy ireo hoe “Iehovah”,ohatra, ny anaran’Andriamanitra ao amin’ny Eksodosy 6:3. Notehirizina ao amin’ny Tranombokin’i Marsh, any Irlandy, ny sora-tanan’i Bedell.—Jereo ilay efajoro hoe “Nahatsiaro Sady Nankasitraka An’i Bedell Izy Ireo.”
NAVOAKA IHANY ILAY BAIBOLY
Vita tanteraka ilay tetikasan’i Bedell tamin’ny 1640 tany ho any, nefa tsy tonga dia azony navoaka. Mbola nisy nanohitra be mantsy izy. Noharatsin’ny mpitsikera ny lehiben’ny mpandika tenin’i Bedell, amin’izay tsy ho tian’ny olona ny zavatra nadikany. Nosamborin’izy ireo mihitsy aza izy, ary avy eo nogadrainy. Nisy antokon’olona tsy tia Anglisy koa, ka nitarika ny olona hikomy tamin’ny 1641 ary be dia be no maty. Narovan’ny Irlandey i Bedell na dia Anglisy aza, satria nitady izay hahasoa azy ireo. Nogadrain’ny miaramila mpikomy anefa izy tamin’ny farany. Nijaly be izy tany, ka azo antoka fa izay no nahafaty azy haingana, tamin’ny 1642. Tsy hitany akory ny nivoahan’ilay Baiboly.
Ny fonon’ilay sora-tanan’i Bedell, tamin’ny 1640 tany ho any, ary ilay Baiboly navoaka tamin’ny 1685
Nisy nandroba sy nandrava ny tranon’i Bedell, ka saika tsy nisy niangana ny zavatra voadikany. Soa ihany fa nisy namany akaiky naka an’ilay izy. Nalain’i Narcissus Marsh ilay izy, tatỳ aoriana. Lasa evekan’i Armagh izy, ary avy eo arsevekan’ny Fiangonan’i Irlandy. Nahazo vola tany amin’ilay mpahay siansa atao hoe Robert Boyle izy, ary sahy namoaka ny Baibolin’i Bedell, tamin’ny 1685.
TENA NILAINA NA DIA TOA TSY NISY DIKANY AZA
Tsy nalaza eran-tany ny Baibolin’i Bedell nefa tena nilaina. Nanampy ny olona hahazo tsara an’izay lazain’ny Baiboly mantsy izy io, indrindra fa ireo olona niteny irlandey tany Irlandy sy Ekosy ary tany an-tany hafa koa. Azon’izy ireo atao izao ny mamaky ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fitenin-drazany, ka afaka mifandray tsara amin’Andriamanitra izy ireo.—Matio 5:3, 6.
“Hoatran’ny hoe miresaka aminay amin’ny fitenin-drazanay Andriamanitra, rehefa mamaky ny Baibolin’i Bedell izahay. Tena zava-dehibe izany satria nanampy anay mianakavy hahafantatra ny fahamarinana ao amin’ny Soratra Masina”
Mbola manampy ny olona hifandray tsara amin’Andriamanitra ny Baibolin’i Bedell hatramin’izao. Vao haingana, ohatra, ny lehilahy iray miteny irlandey no nianatra an’izay tena ampianarin’ny Baiboly. Hoy izy: “Hoatran’ny hoe miresaka aminay amin’ny fitenin-drazanay Andriamanitra, rehefa mamaky ny Baibolin’i Bedell izahay. Tena zava-dehibe izany satria nanampy anay mianakavy hahafantatra ny fahamarinana ao amin’ny Soratra Masina.”
Nahatsiaro Sady Nankasitraka An’i Bedell Izy Ireo
EKSODOSY 6:3 BAIBOLIN’I MAINOOTH
Navoaka tamin’ny 1685 ny Baibolin’i Bedell, ary io ihany no Baiboly nisy tamin’ny teny irlandey, nandritra ny 300 taona nanaraka. Tamin’ny 1981 ny manam-pahaizana katolika vao nandika Baiboly tamin’ny teny irlandey maoderina. Nantsoina hoe Baibolin’i Maynooth ilay izy. Voalaza ao amin’ny sasin-tenin’izy io fa “nahavita be mihitsy ny Fiangonan’i Irlandy namoaka Baiboly, tamin’ny taona 1600 tany ho any.” Ny Baibolin’i Bedell anefa ilay izy. Tsy navelan’ny Eglizy Katolika hamaky azy io intsony ny Katolika, vao haingana.
EKSODOSY 6:3 BAIBOLIN’I BEDELL
Namoaka ny ampahany tamin’ny asa vitany ireo manam-pahaizana namokatra an’ilay Baibolin’i Maynooth, tamin’ny 1971. Anisan’izany ny Boky Dimy Voalohany (irlandey) ao amin’ny Baiboly. Nankasitraka ny asa nataon’i Bedell ireo manam-pahaizana ireo, ka nasiany hoe “Ho fahatsiarovana an’i William Bedell” tao amin’ny pejy voalohany amin’ilay Baiboly nadikan’izy ireo.
Litera efatra hoe YHWH ny anaran’Andriamanitra ao amin’ny Soratra Hebreo. Ilay teny irlandey hoe “Iávé” no nandikan’ireo mpandika ny Boky Dimy Voalohany azy io, any amin’ny toerana sasany nahitana azy tao amin’ny Soratra Hebreo. Misy an’izany, ohatra, ao amin’ny Eksodosy 6:2-13. Nampalahelo anefa fa rehefa navoaka ny Baibolin’i Maynooth, dia tsy nanao hoatran’i Bedell ny mpampanonta azy io. Nesorin’izy ireo tanteraka ny anaran’Andriamanitra, ka nosoloany hoe Tompo, na hoe “an Tiarna” amin’ny teny irlandey.
Fandikana Baiboly Mpandika Baiboly Tantara & Baiboly
Hizara Hizara Nanampy ny Olona Hahazo ny Tenin’Andriamanitra ny Baibolin’i Bedell
MATOAN-DAHATSORATRA Iza moa ny Vavolombelon’i Jehovah?
MATOAN-DAHATSORATRA Hoatran’​ny Ahoana ny Vavolombelon’i Jehovah?
MATOAN-DAHATSORATRA Avy Aiza ny Vola Ampiasainay?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana Izahay no Mitory?
TANTARAM-PIAINANA Nahita Zavatra Tsara Lavitra Noho ny Laza Aho
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Iza moa ny Vavolombelon’i Jehovah?
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA Iza moa ny Vavolombelon’i Jehovah?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Iza moa ny Vavolombelon’i Jehovah?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Iza moa ny Vavolombelon’i Jehovah?